Inkqubo yefogging esetyenziswe kwinkqubo ukungafuneki indlela yenkungu eyomileyo inokusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo. Okwangoku, xa sicinga ngendlela esebenzayo yokutshabalalisa amagumbi, izisombululo ezinjalo zihlala zithathelwa ingqalelo ngabo bajongana nempilo yabanye. Ezi zixhobo zingasetyenziswa ngempumelelo kwiindawo zomsebenzi okanye ngexesha lokuhlanganisana kosapho, kwigadi nasegadini. Inkqubo ezingalunganga zenziwe ngezinto ezisemgangathweni ophezulu, kwaye ii-nozzles ezisetyenzisiweyo zibonakaliswa ngokusebenza okuphezulu.
Khuphela iikhathalogu kunye noluhlu lwamaxabiso >>
Iinkqubo zokutsala intsholongwane kwisibonelelo soYilo lweSixeko
Izixhobo ezingalunganga zokwenza ukuba isuntswana lisebenze ngendlela enomileyo kwaye lisasaza inkungu kunye isibulala-ntsholongwane. Ukulungiselela okunjalo kunesiphumo esibulalayo kwiibacteria kunye neentsholongwane ezikhoyo kwindalo yethu. Umphumo inkungu eyomileyo inepropathi yokungena ephezulu kwaye kwangaxeshanye ikhuselekile kumphezulu ekunxibelelaneni nawo.
Enkosi ngokusetyenziswa iinkqubo ezingalunganga phantsi kwazo zonke iimeko, i.e. kwi iisayithi, w iipaki kunye nezakhiwo ezingaphakathi, kwaye ngenxa yendlela yokusebenzisa izixhobo zokubulala iintsholongwane, ezi zixhobo zisetyenziswa ngokubanzi.
Iinkqubo zanamhlanje zokungalunganga zisebenzisa ukungasasebenzi ulungiselelo lweekhemikhali ngohlobo lwe-aerosol emdaka, evumela ukubulala iintsholongwane, oko kukuthi, ukuncitshiswa okubalulekileyo kwesixa sezinto ezincinci zephathogenic esemoyeni zifezekisiwe.
Ukupheliswa kwee-microorganism ze-pathogenic zisebenzisa iinkqubo zokufota kwakhona kunokwenzeka ezibhedlele, iikliniki zonyango, amagumbi kunye nezithuthi zikawonkewonke.
Ukuba nezikhokelo engqondweni UMhloli oyiNtloko weSithiliekuthinteleni ukwanda kwe-COVID-19, sinikezela izisombululo zanamhlanje zokwandisa ukhuseleko emsebenzini.
kukhusela intsholongwane kwindawo ekhuselekileyo isebenzisa indlela yenkungu eyomileyo
ukubulala iintsholongwane izilwanyana
amanyathelo okhuselo ngqo: iimaski, visors
Izinto zokuhambisa amanzi: kumile nodonga luxhonywe phezulu
uphicotho lwendawo kunye nophuhliso lokuhamba okuphezulu kwabasebenzi kunye nabathengi ukunciphisa isoyikiso esibangelwe sisibetho se-COVID-19.
Izisombululo ezicetywayo malunga izitishi zokutshabalalisa intsholongwaneUkwahlula indawo kunye nezixhobo zokhuselo lobuqu ziyasebenza kwaye ziyazi izinto ngexesha elinye.
Bona kwakhona: Entsha kunikezo! Izikhululo zokulahla intsholongwane-ucoceko lwezandla ezivela kwi-METALCO
Indawo yokubulala intsholongwane kunye nendlela eyomileyo yokuvumela ukubulala iintsholongwane ebusweni kunye nomoya. Iqhutywa liqela elifanelekileyo labasebenzi besebenzisa oomatshini abakhethekileyo kunye namalungiselelo. Le ndlela yamkelwe ukusetyenziswa kumaziko oluntu, ezothutho lukawonkewonke, iiofisi, izikolo, abantwana abancinci kunye nezibhedlele.
Ukubulala intsholongwane eyomileyo yindlela ekhawulezayo nekhuselekileyo yokutshabalalisa intsholongwane, esekwe kwifomula enokuphinda ifakwe, kunye nezivuno zokusetyenziswa kunye nokuqinisekisa umsebenzi we-antiviral, ngokuchasene ne-COVID-19.
Siza kuhlalutya ubume bokusebenza kwesakhiwo sakho
Siza kulungiselela izikhokelo zokuhamba ngokugqibeleleyo kwabasebenzi kunye nabathengi kunye nokunciphisa umngcipheko ngexesha lobhubhani;
Sisekela amava ethu kwiminyaka emininzi yokusebenza yeenkampani ezivela kumzi mveliso weHoReCa, indawo yokutyela, apho ukuhamba kwabantu kunye neemveliso kuyiparameter ephambili;
Kwisiseko sophicotho, siya kuphakamisa izisombululo ezithile malunga noku izitishi zokutshabalalisa intsholongwaneUkwahlula indawo, izixhobo zokhuselo lomntu, unxibelelwano olubonakalayo
UKUFUMANEKA KWEENJONGO NGOKUGQIBELA INDLELA YOKUGQIBELA
ISIQINISEKISO NGEXESHA ukuvumela ukubulala iintsholongwane kumphezulu womphezulu nomoya;
Yenziwe ngu IQELA LESIFUNDO usebenzisa IIKNIKI ZEMALI
INDLELA ESETYENZISIWEYO YOKUSETYENZISWA : kumaziko oluntu, ezothutho lukawonke-wonke, kwiiofisi, ezikolweni, kwizikolo ezinkulisa, ezibhedlele;
UMBONO ukuzalisa inkungu kusetyenziswa oomatshini bethu (100 m3 kuthatha malunga ne-6 imiz.)
INDLELA YOKUFUNDA NOKUKHUSELEKILEYO, esekwe kwifomula enokuphinda ifakwe emzimbeni, akukho zidakamizwa, akukho chlorine, akukho zinto zinetyhefu;
IMveliso inazo IZICWANGCISO ZEENKCUKACHA KUNYE NEZITHUBA ZOKHUSELEKO yamkelekile ukusetyenziswa
KHAWULEZI UKUZIPHATHA NGOKULULA
Dibana nemigangatho EN14476 kwicandelo lezonyango ngokuchasene nobunzima beentsholongwane ezingafakwanga (umz. UNorovirus, Poliovirus, Adenovirus) kunyeIntsholongwane) ekwabandakanya ne-COVID-1
IMveliso EBHALISELWE NJENGEMVELI YOKUGQIBELA
Ugunyaziso lokuthengisa imveliso ye-biocidal: no. 7420/18. Isatifikethi sePZH No.BK / K / 0863/01/2018
Imbonakalo ebanzi yeBiocidal: Itshabalalisa iibhaktheriya, intsholongwane, ii-spores-spores, isikhunta, isikhunta
Intshukumo: Ukubulala iintsholongwane ngokupheleleyo, Ukuhlamba, ukucoca, ukungqinisisa, Ukuvuselela umoya, ukususa ibala
isusa: Umdaniso, uthuli, uthuli, iiSediments, ukungcola kwezinto eziphilayo, iiMicroorganisms, iiPathogens
Izibonelelo kunye nezibonelelo zomsebenzisi
UKHUSELEKILE umsebenzisi, ngokusekwe kwifomula yokuvelisa, enokuphanda ngaphandle kokusela, akukho ziidiliya, akukho chlorine, akukho zityhefu.
I-NON-FLAMMABLE-ukwakheka kwamanzi-ngaphandle-kokuvutha kususa umngcipheko womlilo.
UKULANDELELANA - UKUNGATHATHI CALA kwizinto ezininzi: iiplastiki, uninzi lwezinyithi kubandakanya ialuminiyam, iigasket zerabha, iipeyinti zokupeyinta, amalaphu ...
UMSEBENZI WOKUGQIBELA-ukuhlamba izandla, ukutshiza, ukusula, amagwebu asebenzayo, ukuhlamba, ukutshiza
I-WASHES kunye ne-CLEANS-isusa ngokufanelekileyo amabala kunye nezinto ezingcolisayo eziphilayo: isusa ukungunda, ukungunda, uthuli, igrisi, ioyile, amabala anamafutha avela kwizinto zokwenza izinto kunye neekhaphethi, ukugabha, ilindle, igazi, ukutya okubolayo, inkunkuma yendalo, inkunkuma, njl.
Yenza iFOAM YOKUGQIBELA kumlo we-foam, eyandisa isenzo kumphezulu othe nkqo nakwiziteshi
Ukuqinisekiswa kwe-100% yokungafezeki - kuvavanywa ngokwemigangatho emininzi yeYurophu. (* Itafile)
IZIPHUMO ZOKUSEBENZA NGOKUQHELEKILEYO-Eyona nto ibanzi ye-biocidal spectrum ngexesha elifutshane ukuya kwimizuzu eyi-15 (iBacteria, iiVirus, i-Fungi, i-Spores)
FAST BIOCIDAL-Utshabalalisa iLegionella Pneumophila ngaphakathi komzuzu omnye ngokwe-EN 1, EN 1040.
KUVIMA ukwenziwa kwefungus, ukungunda kunye neebhaktiriya, kuba kuyatshabalalisa ii-spores (spores) - ayikuthinteli ukukhula kwamagciwane kuphela, kodwa ikwatshabalalisa nezinto zemvelo.
USUSA UNDODGE-Isusa ngokusisigxina ivumba elibi, ivumba elibi lenkunkuma yendalo kwaye ishiya ivumba elitsha.
Ukulungiselela kwe-NANOCLEAN AIR GDU (UKULUNGELE UKUSETYENZISELWA) asinto inokuvutha, usekwe amanzi.
Ukulungiswa akunakutya-biodegradable, non-to-poid, non-carcinogenic, allergen- kwaye-engacaphukisi.
Isisombululo esisebenzayo esiyi-5% asifakwanga njengesiyingozi ngokoMgaqo we-1272/2008 / EC.
Hlala kude nabantwana. Funda i-SDS ngaphambi kokuba uyisebenzise.
Iimpawu ezizodwa zezisombululo ezisekelwe kwisilivere kunye ne-nanoparticles yobhedu.
IZIPHUMO ZOKUSEBENZA NGOKUSEBENZA-Olona hlobo lubanzi lwe-biocidal ngexesha elifutshane ukuya kwimizuzu eli-15
(Intsholongwane: 1 ÷ 5 imizuzu, iiVirus: imizuzu emi-5, ukungunda: 1 ÷ imizuzu eli-15, iiSpores: imizuzu emi-5, iMycobacteria: imizuzu emi-5)
FAST BIOCIDAL-sisusa iLegionella Pneumophila bacterium ngomzuzu omnye ngokwe-EN 1.
KUTHENGISA ukuphindaphindeka kweentsholongwane, isikhunta kunye nokubumba, kuba ayithinteli ukukhula kwezinto ezincinci, kodwa ikwatshabalalisa nezinto zabo zemvelo. UVAVANYO- Uvavanywe ngokwemigangatho yeYurophu yeYurophu.
USUSA IPHEPHA ELINGANAKHOYO-ususa ngokusisigxina ivumba elibi lamakhowa kunye nevumba elibi lenkunkuma yendalo.
UKHUSELEKILE lomsebenzisi, esekwe kwifomula yokhuseleko yokuvelisa izinto ezintsha, akukho ziidiliya, akukho chlorine, akukho asidi.
I-NON-FLAMMABLE-indlela esekwe emanzini isusa umngcipheko womlilo.
UMSEBENZI WOKUFUNDA-Ukuhlamba ngesandla, ukutshiza, ukosula, ugwebu olusebenzayo, ukucwiliswa, ukutshiswa.
I-WASHES NE-CLEAN-isusa ngokufanelekileyo amabala kunye nokungcola okungokwemvelo: isusa ukungunda, ukungunda, uthuli, igrisi, ioyile,
amabala amdaka avela kwi-upholstery kunye neekhaphethi, ukugabha, ilindle, igazi, ukubola kokutya, inkunkuma yezinto eziphilayo, njl.
Inemvume ye-PZH kunye ne-PERMIT yokuthengisa kwimveliso ye-biocidal.
nguyen:enika ukubulala iintsholongwaneithini into yokubambisa umoyaelithetha igama elithi disinfectionYintoni isifo sengqondoYintoni isibulala-ntsholongwane kunye nokubaluleka kokuthintela ukwanda kwesifoYintoni isifo sengqondoYintoni isifo, ukubulala iintsholongwane, ukubulala iintsholongwaneYintoni isifo nokubulala iintsholongwaneYintoni isifo sokungafezekisi kwaye sibaluleke ngantoni?Yintoni isibulala-ntsholongwane kwaye kutheni kubalulekile ukunqanda ukwanda kwesifoYintoni isibulala-ntsholongwane kwaye yintoni inxaxheba yawo ekuthinteleni ukwanda kwesifoYintoni isifo sokungabinantsholongwane kunye nokubulala iintsholongwaneYintoni i-disinversal?yintoni intsholongwane kwizinto zokuthambisayintoni i-disin Ukungasebenzi kweenweleyintoni igama elithi disinversalYintoni le nto ukubulala iintsholongwane kwaye kunceda njani ukunqanda ukwanda kwezifoyintoni igama elithi disinversalKuthetha ukuthini ukubulala iintsholongwane?ukungafunekiukubulala intsholongwane 24ukubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwaneukubulala iintsholongwane izihlanguukungafuneki kweentsholongwane emva kwe-mycosisukungafuneki kweembadada ze-lumpexYintoni isifo sengqondoukubulala intsholongwane yintoniukubulala iintsholongwane ukuba yintoni kwaye kubaluleke njani ukuthintela ukwanda kwesifoYintoni isibulala-ntsholongwane kwaye yintoni inxaxheba yawo ekuthinteleni ukwanda kwesifoukubulala iintsholongwane ukuba kuthetha ntoniukubulala iintsholongwane okususaisibulala-zintsholongwane ukuba kutheni kungasekelwa utywalaUkuchasana nentsholongwaneukubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwaneukubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane kwindawo yokuhombisaukubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwane kwi-salon pdfukubulala iintsholongwane kude kube niniukubulala iintsholongwane ngeqandaukungafuneki njengeukubulala iintsholongwane into ebalulekileyoisifo sokubulala iintsholongwane esibalulekileyo ukukhusela ukwanda kwezifoisifo sokubulala iintsholongwane esibalulekileyo ukuthintela ukwanda kwezifoisifo sokubulala iintsholongwane esibalulekileyo ekuthinteleni ukwanda kwesifoimeko yomoya yokubulala iintsholongwaneImeko yomoya yokubulala iintsholongwane yonke intoukubulala iintsholongwane kwihotele nganye ukuba zingaphiukubulala intsholongwane yenkuku yenkukhuukubulala iintsholongwane ityhefu yenkukhu esemva kwengcaukubulala iintsholongwane efulethiniukubulala iintsholongwane izixhoboukubulala iintsholongwane izihlanguukubulala iintsholongwaneI-ozone disinitness yintoniukubulala iintsholongwane ukubulala iintsholongwaneisibulala-ntsholongwane emva kweentshulubeukubulala iintsholongwane emva kokuba efileukubulala iintsholongwane emva kokuba uswelekileukubulala iintsholongwane emvaukubulala iintsholongwane ebusweniukuhlamba umatshini ukubulala iintsholongwaneIzinto zokubulala iintsholongwaneukubulala iintsholongwane ngesandlaisilonda ukubulala iintsholongwaneisilonda ukubulala iintsholongwaneulusu ukubulala iintsholongwaneukubulala iintsholongwane amaqulaIntsholongwane enzuluukubulala iintsholongwane ngokuchanekileyo kunye ne-sodium hypochloriteukungasebenzi gwenxa komzimbaIsinikezeli se-thermalukubulala iintsholongwane kufakelo lwamanzi ashushu njengesiqheloukubulala intsholongwane njengesiqheloukubulala iintsholongwane emanziniukubulala iintsholongwane amanzi okuselainto yokudlala intsholongwaneukungafunwa kwe-ecolabYimalini ukubulala iintsholongwane?kungakanani ukubulala iintsholongwane efulethini?yimalini ukubulala iintsholongwane esibhedini?yimalini ukubulala iintsholongwane iinqwelo zokuthengaKuthatha ixesha elingakanani ukungafumani moyayintoni ukubonakala kwe-disinication?yintoni ukubulala iintsholongwane efulethini?ukubaluleka kokubulala iintsholongwane ekuthinteleni ukwanda kwesifoUkuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane izandlaIntsholongwane ye-demodexChaza ukubaluleka kokubulala izixhobo nezixhoboUkuchasana neparvovirosisiposta yomoya okhupha intsholongwaneukubulala iintsholongwane ukubulala iintsholongwanei-mycobacteria, ukubulala iintsholongwaneJonga igama elithi ukungafezekisi kwimithombo yolwazi ebhaliweyo kwaye ubhale ukuba yintoniUkubulala iintsholongwane kunye nokubulala iintsholongwaneukubulala intsholongwaneinkungu eyomileyoIsifo sokubulala ukubulala iintsholongwane esi sakhiwoigama elithi disinitness yintoniigama elithi ukubulala iintsholongwane, elibalulekile ukuthintela ukwanda kwezifoukungqungqaukuhambisa izimvoamagumbi enkunguinkungu efudumeleyoinkungu yokukhangela ulvUlv fogging ixabisoukujonga uphononongo lwe-ulvfogging Warsawuxinzelelo oluphezulu